Chicken & yenkomo isilayi - Goodao Technology Co., Ltd.
Ukutya ikati / ukutya kwekati
Unyango lwenziwe ngenkuku yokwenyani kunye nenkomo ngaphandle kweemveliso eziphilileyo, ingqolowa, umbona, okanye isoya. Ayinazo izongezo ezingezizo ezokwenziwa, imibala, okanye izilondolozo ezongeziweyo ngokunjalo. Iprotheni sisithako esingu-1. Isidlo esitsha sokutya esilumkileyo, esondlo kwaye kulula ukusigaya.
IProteni yeCrube: 48.6% min
I-Crube Fat: 7.7% ubuninzi
I-Crube Fibre: 0.1% ubuninzi
I-Ash ekrwada: 4.3% ubuninzi
Ukufuma: 14% ubuninzi
Igama leemveliso Inkukhu kunye neSilayi seNkomo
Ukucaciswa kwemveliso 100g ngengxowa yombala ngamnye (yamkela ulwenziwo)
Ifanelekile Zonke iintlobo ukuba izinja kunye neekati ngaphezulu kweenyanga ezintathu ubudala
Beka ubomi kwishelufa Iinyanga ezili-18
Imveliso ephambili Inkukhu, inyama yenkomo
Indlela yokugcina Gwema ukukhanya kwelanga ngokuthe ngqo kwindawo epholileyo kunye nomoya
Ilungu elinye nelinye elivela kubasebenzi bethu bokuthengisa abasebenza ngokukuko abaxabise iimfuno zabathengi kunye nolonxibelelwano lombutho waseTshayina oThengisayo oNinzi oThengisayo weNyama yeSifuba seNkukhu, Samkela amathemba amatsha aphelelwe lixesha kuzo zonke iinkalo zobomi bemihla ngemihla ukuba athethe nathi kunxibelelwano lwenkampani yexesha elide kunye ukufezekisa impumelelo!
I-Chinese ethengisa i-China Chicken Chop, i-Chicken yokutya okuKhawulezayo, sikholelwa ekumiseni ubudlelwane obusempilweni kunye nokusebenzisana okuhle kwishishini. Ukusebenzisana ngokusondeleyo nabathengi bethu kusincedile ekwenzeni izixokelelwano ezomeleleyo zokufumana kunye nokufumana izibonelelo. Urhwebo lwethu lusizuzele ukwamkelwa ngokubanzi kunye nokwoneliseka kwabaxumi bethu abaxabisekileyo kwihlabathi liphela.
Egqithileyo I-sandwich yenkukhu
Okulandelayo: Inkukhu kunye nesilayidi sedada
Uxinzelelo lwe-10 cm kunye nodaka lwenkukhu